रोचक Archives | Page5of 58 | बिगुल न्यूज
एफिल टावरको अगाडि महिलाहरुले खोले ब्रा,यस्तो छ कारण!
जेठ ०२, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी, ब्रेस्ट क्यान्सर दुनियाभरमा एक गम्भीर रोगको रूप प्रस्तुत भएको छ। ब्रेस्ट क्यान्सरको बारेमा मानिन्छ कि यो मात्र महिलाहरुमा हुने गर्दछ। महिलामा हुने वाला क्यान्सरमा ब्रेस्ट क्यान्सर प्रमुख रहेको छ …
तपाई होटेलमा सर्भिस मन परेर टिप्स दिने चलनको बारेमा त थाहानै होला। तर टिप्सको रुपमा दिइने रकम भने खासै ठुलो परिमाणको नहुने गर्छ। तर अमेरिकामा विश्वास गर्न नसकिने घटना घटेको …
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा कम उमेरकी आमा: यस्तो छ रहस्यमय तथ्य!
जेठ ०१, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी, पेरूमा बस्ने ‘लीना मदीना’ नामक यस बालिकाले करिब ५ वर्षको उमेरमा नै बच्चा जन्माएर दुनियाँलाई आश्चर्यजनकमा पारेकी थिइन् । त्यस समयमा यो पहिलो यस्तो मामिला थियो जसमा यति कम उमेरको कुनै पनि …
विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ट्री हाउस, जसलाई बनाउन भगवानले दिए आदेश!
बैशाख ३१, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी, अमेरिकाको टेनेसी राज्यको क्रासविले शहरमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो ट्री हाउसको बारेमा सायद थोरैलाई थाहा होला । यसलाई ६ ओटा रुखको साहारामा बनाईएको छ । १०० फीट अग्लो यो ट्री हाउस कुनै …
यी छात्राले कक्षामा नै खोलिन आफ्नो सबै कपडा, भाइरल बन्यो तस्वीर!
बैशाख ३०, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी, अमेरिकाको नामी कर्नेल यूनिभर्सिटीमा एक अनौठो प्रर्दशन भएको छ । अमेरिकाको यस यूनिभर्सिटीको एउटा क्लासमा एक छात्रा छोटो कपडा लगाएर पुगेकी थिइन् । छात्राको कपडा देखेर त्यहाँ भएको प्रोफेसरले जब …
यस किसानले गाईलाई लगाईदिए आफ्नो पत्नीको ब्रा, कारण जान्नु भएमा उड्नेछ तपाईको होश
बैशाख ३०, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ। के तपाईले आज सम्म कहिल्यै गाईले ब्रा लगाएको देख्नु भएको छ ? शायद पक्कै पनि देख्नु भएको छैन होला। हाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यस्तै एक तस्बिर भाइरल …
दुनियाँको एक मात्र देश जहाँ कोका-कोला बिक्दैन, यस्तो छ आश्चर्यचकित १० रोचक तथ्यहरु!
बैशाख २७, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी, आज हामी चर्चा गर्नेछौ ‘कोका-कोला’ को केही रोचक तथ्यको बारेमा । अहिलेसम्म तपाईलाई यसको बारेमा यति मात्र थाहा होला कि यो ड्रिंकलाई अमेरिकामा बनाईएको थियो । तपाई यसको स्वाद …
बाघको बिहे हेर्न मान्छेहरुको भिड…
बैशाख २७, २०७५ बिगुल न्यूज - DB
एजेन्सी । भारतको राजधानी दिल्लीमा रहेको एउटा चिडियाखानामा बाघको बिवाह भएको हेर्न आउने भिड लागेको छ। उक्त चिडियाखानमा एउटा बंगाल टाइगर र ह्वाइट टाइगरबीच विवाह गराईएको हो। दुई बाघको बिवाहबारे जानकारी दिँदै चडियाखानाकी निर्देशक …
जब आर्ट म्यूजियममा यसरी एक हुल नाङ्गा मानिसहरु घुसे….
बैशाख २६, २०७५ बिगुल न्यूज - DB
एजेन्सी । प्राणीहरुमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, मानिस। त्यसैकारण पनि मानिस समाजमा बस्ने र एउटा निश्चित सभ्यता र नीति र परिधीमा पनि बस्ने गर्छन्। तर, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भने मानव सभ्यताभित्र …
फ्रान्सको अनौठो सडक जुन दिनमा दुई पटक अदृश्य हुन्छ
बैशाख २५, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ । के तपाई यस्तो सडकको बारेमा जान्नुहुन्छ जुन आँखाको अगाडी नै गायब हुन्छ ? पक्कै छैन होला। तर फ्रान्समा साँचै नै यस्तो सडक रहेको छ। फ्रान्समा एक यस्तै सडक छ …
४१ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज - DB